माइक्रोम्यासको ‘क्यान्भास निट्रो ३’ बजारमा आयो, मूल्य रु. १५ हजार ८४०
बुद्धबार, पौष १५, २०७२
काठमाडौं । भारतीय मोवाइल ब्राण्ड माइक्रोम्याक्सले नयाँ फोन ‘क्यान्भास निट्रो ३’ नेपाली बजारमा भित्राएको छ । अटोफोकस हुने १३ मेगाफिक्सेलको मुख्य क्यामरा रहेको यो फोनमा पाँच मेगाफिक्सेलको फ्रन्ट क्याम्रा पनि
दरबारमार्गमा पनि सिटिभीको मल्टिब्राण्ड शोरुम, एक हजारदेखि नौ लाखसम्मका मोवाइल बिक्रीमा
मंगलवार, मंसिर २९, २०७२
काठमाडौं । सिटिभी मोबाइल प्रालिले दरबारमार्गस्थित मर्कन्टायल प्लाजामा ‘एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालि’को नामबाट मल्टिब्राण्ड मोबाइल सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
स्मार्टकार्ड चालक अनुमतिपत्र वितरण पुस २ गतेदेखि
काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती रोक्ने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभागले लागू गरेको स्मार्टकार्ड चालक अनुमतिपत्र पुस २ गते बिहीबारदेखि वितरण हुने भएको छ ।
माइक्रोम्यासको ‘क्यानभास ५इ४८१’ नेपाली बजारमा, मूल्य २१ हजार पाँचसय रुपियाँ
बुद्धबार, मंसिर २३, २०७२
काठमाडौं । भारतीय मोवाइल ब्राण्ड माइक्रोम्याक्सलको नयाँ उत्पादन क्यानभास ५इ४८१ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । विशेष किसिमको सिम प्रोसेसिङ रहेको यस फोन एन्ड्रोइड ५.१ ललिपप अपरेटिङ सिस्टमबाट सञ्चालित हुन्छ ।
आइफोनका नयाँ संस्करण नेपाली बजारमा, मूल्य ९० हजारदेखि एक लाख ३३ हजार रुपियाँसम्म
शनिबार, मंसिर १२, २०७२
काठमाडौं । नेपालका आइफोनका पारखीहरुलाई खुशीको समाचार छ । एप्पलको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनले आइफोनका नयाँ संस्करणहरु ‘सिक्स एस’ र ‘सिक्स एस प्लस’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
सुचना प्रविधिको विकासका लागि सगुन र क्यानबीच समझदारी
काठमाडौं । सगुन इङ्कर्पोरेशन र क्यान महासंघबीच नेपालको सूचना प्रबिधि क्षेत्रको बिकास र बिस्तारमा सम्भायता अध्ययनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
माइक्रोम्याक्सको नयाँ 'क्यू३९२ क्यानभास जुइस३' बजारमा
मंगलवार, मंसिर १, २०७२
काठमाडौं । भारतीय मोवाइल ब्राण्ड माइक्रोम्याक्सले नयाँ फोन क्यू३९२ क्यानभास जुइस३ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम मूल्यका फोनहरुको उत्पादनमा लोकप्रिय रहेको माइक्रोम्यासको यो फोनमा ५.१ ल्लिपप ओस अपरेटिङ सिस्टम
सामसुङ दशैं बोनान्जाको दोस्रो बजाज पल्सर २०० आरएसको विजेता घोषणा
बिहीवार, कार्तिक १२, २०७२
काठमाडौं । सामसुङले सञ्चालन गरेको दशैं बोनान्जा नामक योजना अन्तर्गत सामसुङ नेपालले बजाजपल्सर २०० आरएस को दोस्रो विजेता घोषणा गरेको छ ।
‘सामसुङ जे२’ नेपाली बजारमा, मूल्य रु. १३ हजार ४९०
बिहीवार, असोज २१, २०७२
काठमाडौं । सामसुङ नेपालले ‘सामसुङ जे’ संस्करण अन्र्तगतको अर्को नयाँ उत्पादन ‘सामसुङ जे२’ नेपाली बजारमा भित्राएको छ ।
​सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स “स्मार्ट महाउत्सव” योजना सुरु
शनिबार, असोज १६, २०७२
काठमाडौं । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता हिम इलेक्ट्रोनिक्स र त्रिवेणी व्यापारले दशैं र तिहारलक्षित “स्मार्ट महाउत्सव” योजना बजारमा ल्याएको छ ।
​पानासोनिकका पाँच नयाँ फोन नेपाली बजारमा, मूल्य दुई हजार तीनसयदेखि साढे २२ हजारसम्म
मंगलवार, असोज ५, २०७२
काठमाडौं । नेपालका लागि पानासोनिक मोबाइल फोनको आधिकारिक बिक्रेता एलाइड ट्रेड लिङ्क इन्टरनेशनलले यसका पाँच नयाँ फोन नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
​तीजको अवसरमा मोवाइल एक्सपोमा महिलालाई छुट
सोमबार, भाद्र २८, २०७२
काठमाडौं । लगनखेलस्थित ललितपुर मलमा जारी मोवाइल एक्सपो २०७२ मा तीजको अवसरमा महिलाहरुलाई निःशुल्क प्रवेश र मोवाइल खरिदमा विशेष छुट दिइएको छ ।
​मोवाइल एक्सपोको ५० हजारद्धारा अवलोकन
शनिबार, भाद्र २६, २०७२
ललितपुर । लगनखेलस्थित मोवाइल कम्प्लेक्समा आयोजित मोवाइल एक्सपोको दोस्रो दिन ५० हजारले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ ।
​मोबाइल एक्सपोमा विशेष एक्सचेन्ज अफर
बुद्धबार, भाद्र २३, २०७२
ललितपुर । लगनखेलस्थित संचय कोष भवनमा शुक्रबारबाट सुरु हुन लागेको मोवाइल एक्सपो २०७२ मा मोवाइल एक्सचेन्ज (साटफेर)को व्यवस्था मिलाइएको छ ।
​वर्षाको समयमा स्मार्टफोनको सुरक्षा गर्न ‘कण्डम कभर’
मंगलवार, भाद्र २२, २०७२
काठमाडौं । यो मनसुनको मौसममा कुन बेला र कतिखेर कहाँ रहँदा पानी पर्दछ भन्ने कुनै जानकारी नहुनसक्दछ ।
​माइक्रोम्याक्सको ‘क्यानभास सिल्भर ५’ नेपाली बजारमा
सोमबार, भाद्र २१, २०७२
काठमाडौं । माइक्रोम्याक्सले क्यानभास सिल्भर ५ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो अहिलेसम्मकै संभवतः सबैभन्दा पातलो फोन भएको माइक्रोम्याक्सको दावी छ ।
​ललितपुर मलमा मुलुककै ठूलो मोवाइल शोरुम सुरु हुँदै
ललितपुर । लगनखेलस्थित ललितपुर मल तथा ललितपुर मोवाइल कम्प्लेक्सले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको र नेपालकै ठूलो मण्टिब्राण्ड मोवाइल शोरुम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
​टेलिकमको गुणस्तर सुधार गर्न विकास समितिको निर्देशन
शुक्रबार, भाद्र ४, २०७२
काठमाडौँ । संसद्, विकास समितिले नेपाल टेलिकमसेवा र गुणस्तरलाई सुधार गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
​क्यान सफ्टेक २०१५ भदौ दोस्रो सातादेखि
शुक्रबार, श्रावन २९, २०७२
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान)ले आउँदो भदौ १७ देखि २० गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सुविसु क्यान सफ्टेक २०१५ आयोजना गर्ने भएको छ ।
​जियोनिले ‘पायोनियर पी टु एम’ ल्याउँदै, मूल्य रु. १० हजार
बिहीवार, श्रावन ७, २०७२
काठमाडौं । जियोनिले चाँडै एक नयाँ बजेट स्मार्टफोन ‘जियोनि पायोनियर पी टु एम’ नेपाली बजारमा भिर्याउने भएको छ ।
​हुवावेको वाई५सी र वाई३सी बजारमा, मूल्य रु. १० र ८ हजार
आईतवार, श्रावन ३, २०७२
काठमाडौं । टेलि टू प्रा.लि.ले नेपाली बजारमा हुवावे मोबाइलको वाई५सी र वाई३सी मोडलको फोनहरु थपेको छ ।
​‘माइक्रोम्याक्स क्यानभास प्ले क्यू३५५’ बजारमा, मूल्य १३ हजार छसय
सोमबार, आषाढ २८, २०७२
काठमाडौं । माइक्रोम्याक्स मोबाइल कम्पनीले नयाँ मोबाइल फोन ‘माइक्रोम्याक्स क्यानभास प्ले क्यू३५५’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
​माइक्रोम्याक्सको ‘डुडल४ (क्यू३९१)’ बजारमा, मूल्य १६ हजार
बिहीवार, आषाढ १७, २०७२
काठमाडौं । माइक्रोम्याक्सले नेपाली ग्राहकका लागि डुडल४ (क्यू३९१) मोवाइल बजारमा ल्याएको छ ।
​माइक्रोम्याक्सको तीन नयाँ मोवाइल बजारमा
सोमबार, आषाढ १४, २०७२
काठमाडौं । माइक्रोम्याक्स मोवाइलले नेपाली ग्राहकका लागि तीन नयाँ मोडल ‘बोल्टडी२००, बोल्टक्यू३३५ र क्यान्भास निट्रो इ३११ नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
​हुवावेको नयाँ स्र्माटफोन र ट्याबलेट बजारमा
काठमाडौं । चिनियाँ मोवाइल निर्माता हुवावेले स्मोर्टफोन र ट्याबलेटका तीन नयाँ मोडल नेपाली बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ ।
डिसहोमले थप्यो एचडी च्यानल
बुद्धबार, आषाढ ९, २०७२
काठमाडौं । डिस होमले आफ्नो सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन नयाँ प्रविधिमा आधारित हाई डेफिनेसन च्यानल थप गरेको जनाएको छ ।
सुचना प्रविधि पार्कले बल्ल पायो निर्देशिका, अब आइटी उद्योग विकास गर्न सकिने
शुक्रबार, जेष्ठ २९, २०७२
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि पार्कलाई व्यवस्थित गर्न सुचना प्रविधि पार्क (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ ।
Results 627: You are at page 21 of 21
First Prev 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21